Te hampiasa vola amin'ny Watch Rapport?
Raha ny fatra-pitia anao amin'ny famantaranandro lafo vidy sy firavaka tsara dia manambola amin'ny iray amin'ireo tsena fivarotana haingana indrindra.
Hevitra misongadina amin'ny mpampiasa vola
Afaka miaro soa aman-tsara ny mpanjifa amin'ny fiarovana ny mpividy.
Ny mpivarotra dia mivarotra vokatra fotsiny amin'ny Watch Rapport mivantana.
Miavaka ny Watch Rapport ary miavaka amin'ireo mpifaninana aminy.
10% miverina APY
Ankafizo ny fiverenana miakatra avo kokoa miaraka amin'ny risika mitaiza.
Fitsipiky ny mpitarika
Mamorona sy manatsotra
Marina, Be dia be
Mianara ary mahaliana
Manakarama sy mampivoatra ny tsara indrindra
Misisika amin'ny fenitra avo indrindra
Bias ho an'ny hetsika
Manana hazondamosina; Tsy ekena sy fanoloran-tena
Izahay dia samy tompon'andraikitra amin'ny fampisehoana ireo fitsipika momba ny fitarihana amin'ny alàlan'ny asantsika isan'andro. Ny fitsipiky ny fahaiza-mitarika anay dia mamaritra ny fomba fanaovan'i Watch Rapport ny asa aman-draharaha, ny fomba itarihan'ny mpitarika ary ny fitazonana ny mpanjifa ho eo afovoan'ny fanapahan-kevitra raisinay.
Manomboka amin'ny mpanjifa ny mpitarika ary miasa mihemotra. Miasa mafy izy ireo hahazoana sy hitazomana ny fahatokisan'ny mpanjifa. Na dia mijery ny mpifaninana aminy aza ny mpitondra, dia misedra ny mpanjifa izy ireo.
Tompona ny mpitondra. Mieritreritra lavitra izy ireo ary tsy mahafoy ny tombana maharitra ho an'ny valiny maharitra. Miasa amin'ny anaran'ny orinasa iray manontolo izy ireo, mihoatra ny ekipany ihany. Tsy nilaza mihitsy izy ireo hoe “tsy anjarako izany.”
Manantena sy mitaky fanavaozana sy famoronana avy amin'ny ekipany ny mpitarika ary mitady fomba hanatsorana azy ireo foana. Mahafantatra ivelany izy ireo, mitady hevitra vaovao na aiza na aiza, ary tsy ferana amin'ny "tsy noforonina eto." Rehefa manao zava-baovao isika dia manaiky fa mety ho diso hevitra mandritra ny fotoana maharitra isika.
Marina ny voalazan'ny mpitondra. Manana fahaiza-mandanjalanja sy fahatsapana tsara izy ireo. Mitady fomba fijery samihafa izy ireo ary miasa mba hanamafisana ny zavatra inoan'izy ireo.
Ny mpitondra tsy vita mianatra ary mitady hanatsara ny tenany hatrany. Liana amin'ny fahafaha-manao zavatra vaovao izy ireo ary manao zavatra hijerena azy ireo.
Ny mpitarika dia mampiakatra ny bara fampisehoana miaraka amin'ny karama sy fampiroboroboana rehetra. Mahafantatra talenta miavaka izy ireo ary mampihetsi-po an-tsitrapo azy ireo manerana ny fikambanana. Mampivelatra ny mpitondra ny mpitondra ary mandray am-po ny andraikiny amin'ny fampianarana ny hafa. Miasa amin'ny anaran'ny olonay izahay hamorona rafitra ho an'ny fampandrosoana toa ny Career Choice.
Ny mpitondra dia manana fenitra avo tsy miovaova - maro ny olona mety mieritreritra fa avo lenta ireo fenitra ireo. Ny mpitarika dia manandratra hatrany ny bara ary mitondra ny ekipany hanatitra vokatra, serivisy ary dingana avo lenta. Ny mpitarika dia miantoka fa ny kileman-toetra dia tsy voadidy ary ny olana dia raikitra mba hijanonany.
Ny fisainana kely dia faminaniana manatanteraka ny tenany. Mamorona sy mampita torolàlana feno fahasahiana ny mpitarika izay manome aingam-panahy ny vokatra. Hafa ny fiheveran'izy ireo ary mijery manodidina ny fomba hanompoana ny mpanjifa izy ireo.
Haingana ny raharaha eo amin'ny asa. Fanapahan-kevitra sy hetsika maro no azo haverina ary tsy mila fandalinana be loatra. Manome lanja ny fakana risika voaisa izahay.
Mahavita bebe kokoa amin'ny kely kokoa. Ny teritery dia miteraka fahaizana, fahaleovan-tena ary famoronana. Tsy misy teboka fanampiny amin'ny fitomboan'ny headcount, ny haben'ny teti-bola na ny fandaniam-bola raikitra.
Mihaino tsara ny mpitondra, miteny am-pahatsorana ary mitondra ny hafa am-panajana. Manakiana mafy ny tenany izy ireo, na dia mahasosotra na mahamenatra aza ny fanaovana izany. Tsy mino ny fofon'ny menaka manitra an'ny vatany na ny ekipany ny mpitarika. Mampiorina ny tenany sy ny ekipany hanohitra ny tsara indrindra izy ireo.
Miasa amin'ny ambaratonga rehetra ny mpitarika, mijanona mifandraika amin'ny antsipiriany, manadihady matetika, ary miahiahy rehefa tsy mitovy ny metrika sy ny anekdota. Tsy misy asa ambanin'izy ireo.
Adidin'ny mpitondra ny manohitra am-panajana ny fanapahan-kevitra rehefa tsy mifanaraka, na dia tsy mahazo aina na mandreraka aza ny fanaovana izany. Ny mpitondra dia manana faharesen-dahatra ary mandefitra. Tsy manaiky lembenana izy ireo noho ny firaisan-kina ara-tsosialy. Vantany vao tapaka ny fanapahan-kevitra dia manatanteraka tanteraka izy ireo.
Ny mpitarika dia mifantoka amin'ny fampidiran-danja ho an'ny orinasany ary manolotra azy ireo amin'ny kalitao mety sy amin'ny fomba mety. Na eo aza ny fihemorana dia miakatra hatrany izy ireo ary tsy milamina mihitsy.
Fanodinana azo itokisana, fifanakalozana azo antoka ary serivisy mangarahara - izany no antony ahafantarana ny Watch Rapport sy ankafizin'izao tontolo izao. Ireo tia ireo dia hahita izay tena tadiaviny: famantaranandro lafo vidy amin'ny karazany rehetra.
Vonona ny hampiasa vola?
Mifandraisa aminay anio mba hijerena ny fahafaha-mampiasa vola.
297 Kingsbury Kilasy, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449